वित्तीय क्षेत्रमा नेपाली महिलाको पहुँच : दोब्बरले बढ्यो बैंक खाता
रमेश लम्साल/काठमाडौँ, १६ कात्तिक । पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा नेपाली महिलाको पहुँच क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकाङ्कको ‘वित्तीय संस्थामा महिलाका खाता’ शीर्षकमा सो विषय समावेश गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद नागिलाका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने नेपालीको सङ्ख्या दुई करोड ३५ लाख रहेका छन् । ‘एकै व्यक्तिका पनि तीन÷चार वटासम्म बैंक खाता रहेका छन्, सबै खातालाई फरकफरक खाताका रुपमा लिइन्छ’, सहायक प्रवक्ता नागिलाले भने ।
अष्ट्रेलियामा ९९ दशमलब दुई, अष्ट्रियामा ९८ दशमलब चार, बेल्जियममा ९८.८, चीनमा ७६ दशमलब चार प्रतिशत महिलाको पहुँचमा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । यस्तै बेलायतमा ९६ दशमलब एक प्रतिशत ४, अमेरिकामा ९२ दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै बैंकिङ पहुँचमा रहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिलालाई नै केन्द्रित गरेर खाता खोल्ने कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले महिलालाई नै केन्द्रित गरे महालक्ष्मी बचत खाता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कृषि विकास बैंकले एक घर, एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरेको छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि महिला केन्द्रित खाता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यी विभिन्न कार्यक्रमले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिलाको पहुँच बढाएको छ । रासस
सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण, मूल्यवृद्धिको अनुपात भने बढ्ने
सुनको मूल्य फेरि बढ्यो, तोलाको कति ?
पूर्व क्षेत्रको दुई विमानस्थलमा सीता एयर र माउन्टेन हेलिकोप्टरले सेवा प्रदान गर्ने
शेयर बजार : कारोबारको सुरुवातबाटै उकालो लाग्यो नेप्से
आजपनि घट्यो सुनचाँदीको भाउ, तोलाको कति ?
सांकेतिक तस्बिर धनुषा, २८ मंसिर । प्रहरी निरीक्षकसहित ३ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बम बिस्फोटमा संलग्न रहेको आरोपमा ३ जना...
सेना लिएर काठमाडौं आउँदै गरेको बस दुर्घटना
काठमाडौं, २८ मंसिर । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कावासोती नगरपालिका–३ स्थित राजमार्गमा सुर्खेत पृतनादेखि काठमाडौँ छाउनीका...
काठमाडौँ, २८ मंसिर । आज राति प्रिमियर लिगमा विशेष ६ खेलहरु हुँदेछन् । यस सिजन उच्च फर्ममा रहेको लिभरपुलले वाटफोर्डसँग प्रतिस्पर्धा...